आयो यस्तो नियम अब के हुन्छ ?अब देखि बिहे गर्नुभन्दा पहिले तीन महिना तालिम लिनुपर्ने ! - Aajako Nepali Khabar
आयो यस्तो नियम अब के हुन्छ ?अब देखि बिहे गर्नुभन्दा पहिले तीन महिना तालिम लिनुपर्ने !
एजेन्सी । बिहे गर्ने नेपाली परम्परा अनुसार मागी बिबाह, राजी खुसीमा गरिने भागी बिबाह र अदालतमा गरिने काेर्ट म्यारिज हामीले देखिअाएकै चलन हाे । बिहेका लागि केटाकेटीको मन मिल्नु पर्यो । परम्परागत बिहेमा घरपरिवारको पनि स्विकृति अनिवार्य हुन्छ ।
यसबाहेक बिहेका लागि कुनै परीक्षा नै पास गर्नुपर्ने नियम दुनियामा कतै सुनिएको थिएन । तर कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान इण्डोनेसियामा लागू हुने भएको छ । हो, इण्डोनेसियामा बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ ।
ताकि वैवाहिक जीवनका समस्याहरुलाई सहजै हल गर्न सकियोस् र दाम्पत्य जीवनका समस्याकै कारण सम्बन्ध नटुटोस् ।साथै बिहेलाई कसरी सफल बनाउने र बालबच्चा कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा पनि उक्त पाठ्यक्रममा सिकाइनेछ ।
सं#क्रमणको त्रासबाट मुक्त हुन र स्वस्थ रहन असल खानपानका 1० उपाय जसमा विशेष ध्यान दिने उपायबारे हेर्नुहोस
के तपाई आफ्नो तौल बढाउन चाहानुहुन्छ? अब परिसान नहुनुहोस ! हेर्नुहोस तौल बढाउन सजिलो तरीका महिला पुरुस दुवै को लागि !